गाउँले जनताको काम गर्छु, सरकार र पैसाका लागि गर्दिनँ « News of Nepal
गाउँले जनताको काम गर्छु, सरकार र पैसाका लागि गर्दिनँ
२६ श्रावण २०७६, आईतवार
महावीर पुन, वैज्ञानिक
म्याग्दीको अन्नपूर्ण नगरपालिका अन्तर्गत नान्गी गाउँमा जन्मिनु भएका महावीर पुन माध्यमिक शिक्षा चितवनबाट प्राप्त गरी उच्च शिक्षाको लागि अमेरिका नाव्रेस्का विश्वविद्यालय पुग्नुभयो । अमेरिकाबाट आफ्नै घरगाउँमा केही गर्न फर्किएपछि शिक्षा, स्वास्थ, सञ्चारलगायत धेरै क्षेत्रमा समाज परिवर्तन गर्न सक्षम रहे ।
समाज परिवर्तनलाई पहिचान गरी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उपाधिबाट सम्मानित भए । म्यागासेसेजस्तो उच्च पुरस्कारबाट सम्मानित माहाविर पुन, अमेरिका विश्वविद्यालय नेवे्रस्काले मानार्थ डाक्टर उपाधि पनि दियो । मान्छेको दुख देखेर आत्मबल पाउने डाक्टर पुन अहिले आविस्कार केन्द्रमा आवद्ध हुनुहुन्छ । नेपाल समाचारपत्रका लागि डाक्टर पुनसंँग अर्जुन कार्कीले गर्नुभएको कुराकानीः
इन्टरनेट भन्ने नाम नै थाहा नभएको दुर्गम गाउँमा जन्मिनु भई इन्टरनेटको विस्तारमा यति धेरै कार्य गरिसक्नुभएको छ । आफ्नो जीवनसंघर्षको आत्मबलको स्रोत केलाई मान्नुहुन्छ ?
विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न खालका कथाहरु बनाउँछन्– मैले यस्तो कुराले आत्मबल पाएँ भनेर । कसैले कुनै नेताबाट अथवा कसैले आफ्नो बा–आमाबाट । तर मैले भन्ने कुरा के हो भने– मैले चाहिं मान्छेको दुख देखेर आत्मबल पाएको हु । मैले जतिपनि कामहरु गरेको छु– आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि गरेको छोइन । त्यो काम मैले समाजको हितको लागि गरेको छु । त्यो किन गरेको हु भने समाजको दुख मैले नजिकबाट हेरेको छु । त्यो समाजको दुखसंँग परिचित छु ।
त्यसकारणले मेरो आत्मबलको स्रोत चाहिं त्यस समाजको आवश्यकता, नागरिकको दुख नै हो । त्यो दुख र आवश्यकताले मलाई काम गर्न हौसला प्रदान ग¥यो । समाजमा सञ्चार, स्कुल, स्वास्थ्यआदि कुराहरुको आवश्यकता नभईदिएको भए मैले त्यो काम गर्ने थिइनँ । सञ्चार मात्र होइन, त्यो त एउटा सानो काम हो । समाज विकासमा लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, पर्यटन, आय–आर्जन आदिका लागि धेरै काम भएको छ । सञ्चारले मात्र त गाउँलेको दुख त हट्दैन नि ।
अहिले चाहिं केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले म आविस्कार केन्द्रमा काम गर्दैछु । यो राष्ट्रको दुख देखेर नै खोलेको हो । आविस्कार केन्द्रमा जनताको दुख देखेर काम गरिरहेको छु । समाजको दुख देखेर काम गरेको पनि २६–२७ वर्ष भयो । अब चाहिं राष्ट्रको दुख समाधान गर्नको लागि काम गरिरहेको छु । सबैलाई थाहा छ, हाम्रो राष्ट्र गरिब छ । जनताले दुख पाएका छन् । रोजगारी छैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ तर यो दुखलाई कसरी निर्मूल पर्ने भन्ने कुरा चाहिं हामीले नै सोच्नुपर्छ ।
अहिले विदेशिने हलर चलेको छ । देशमा कुनै उद्योगधन्दाहरु छैनन् । देशमा कुनै चिज उत्पादन हुदैन । यस्ता दुखलाई समाधान गर्नको लागि देशलाई आर्थिक रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । देशलाई आर्थिक रुपमा विकास गर्न प्रतिभा भएको मान्छे देशमा बस्नुपर्छ । अन्यथा देश कहिले पनि विकसित बन्दैन । देशको दुख देखेर राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रको सुरु गरियो ।
शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दा तपाईंको प्राथमिक तहदेखि मानार्थ विद्यावारिधिसम्मको शैक्षिक गोरेटो कस्तो रह्यो ?
माध्यमिक तहसम्म नाग्नी भन्ने गाउँमै अध्ययन गरे । त्यसपछि उच्च माध्यमित तह, जुन चाहिं अहिले माध्यमिक नै भनिन्छ) त्यो चितवनबाट गरें । त्यसपछि म १३ वर्षसम्म शिक्षक भएर काम गरें । त्यसपछि पढ्नको लागि अमेरिका गएँ । अमेरिकाको नेव्रास्का विश्वविद्यालयले स्कलरसिप दिएको हुनाले पढ्न गएको हो । पढेर आएर धेरै वर्ष काम गरी सकेपछि सामाजिक पहिचानको लागि अशोका फेलोसिप भन्ने एउटा पहिचान पाएँ ।
आईटि अमेरिकामा पढिसकेपछि अमेरिका छाडेर नेपाल किन फर्किनु भयो ? अमेरिकामै काम पाउनुहुन्थो नि ।
आफ्नै गाउँघरमा केही गर्न सकिन्छ कि हेरम् न भन्ने हिसावले फर्किएको थिएँ । फर्किसकेपछि केही वर्ष त गाउँका स्कुलमा काम गरें । समाज विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यआदि क्षेत्रमा धेरै वर्ष काम गरें । पछि गाउँघरको आवश्यकता सञ्चारक्षेत्रमा देखियो । सबै कुराको विकास हुनको लागि सञ्चार चाहिने रहेछ भन्ने देखियो । अनि इन्टरनेटको सुविधाको लागि काम गरें । यो क्रम बिस्तारै बढ्दै गयो । त्यतिखेर इन्टरनेटको टावर बनाउने पैसा हुदैनथ्यो । जंगलका रुखहरुमा टावर राखेर इन्टरनेटको नेटवर्क विस्तार गर्ने काम गरें । त्यो इन्टरनेट त दुखले र समाजको आवश्यकताले लगेको कुरा हो ।
केही वर्षअघि गाउँ–गाउँमा इन्टरनेटबाट काठमाडौका स्वास्थ्य सेवा–सुविधाहरु पु¥याउनु भएको छ भन्ने कुुरा समाचारमा आएको थियो । यो कसरी पु¥याइरहनु भएको छ, गाउँलेले कस्तो सेवा–सुविधा पाइरहेका छन् ?
यहाँका डाक्टरहरुसंँग टेलिमेडिसिनबाट सम्पर्क गराइएको छ । यो धेरै अगाडिदेखि भइरहेको काम हो । मेले गरेको भनेको जनताको लागि हो र जनतासँंग काम गरेको हो । सरकारसंँग मैले केही काम गरेकै छैन अहिलेसम्म । मलाई कुनै सरकारले खटाएर फलानो ठाउँमा गएर काम गर भनेको होइन । म आफ्नो खुसीले गाउँमा गएर बसेको हो । जनताको दुखकष्ट हर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर काम गरेको हो । त्यसकारणले जनताको काम हो । मैले कहिले पनि मेरो काम भनेर पैसाको लागि काम गरिन ।
सञ्चार माध्यम गाउँगाउँसम्म पु¥याउनु पर्छ भन्ने सोच कसरी आयो ? कसरी इन्टरनेट विकास गर्नुभयो र कामका सिलसिलामा कस्ता चुनौतीहरु रहे ?
म इन्टरनेट लैजान गाउँ गएको होइन । गाउँमा के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर गएको हो । इन्टरनेट ल्याउने भन्ने कुरा त गाउँमा बसेको १० वर्षपछिको कुरा हो । गाउँमा म १९९२ मा गएँ र इन्टरनेट २००२ मा ल्याएँ । यो दस वर्षसम्म त मैले अरु सामाजिक काम गरें । मैले शिक्षा, स्वास्थ्यको लागि विभिन्न किसिमका काम गरें । ती सबै कामहरु गर्ने क्रममा सञ्चारको पनि आवश्यक प¥यो ।
त्यसैले सञ्चारको पनि काम गरियो । तर यो सञ्चार त एउटा सानो काम हो । इन्टरनेट लैजाने भन्ने त १०, १५ प्रतिशत मात्र काम हो । यी सबै काम गर्दा पनि मलाई के थाहा भयो भने, यति काम गरेर देशको विकास हुदैन रहेछ । यसरी खुद्रा काम– गाउँमा इन्टरनेट लगेर, दुई चारवटा स्थास्थ्य चौकी बनाएर, यस्ता कामहरु गरेर देशको विकास हुन्न रहेछ । यसले देशको आर्थिक विकास गर्दैन ।
एउटा सामाजिक विकास चाहि ग¥यो तर देशको विकास गर्दैन । देशमा अनुसन्धानको केन्द्र विकास गर्नुपर्छ भन्ने भयो । देशमा अनुसन्धान आविस्कार केन्द्र चाहिन्छ भन्ने भयो । आविस्कार केन्द्रहरु नखोलेसम्म देशको आर्थिक विकास गर्न नसकिंदो रहेछ । देशमा रोजगारीको सृजना गर्न सकिंदो रहेनछ ।
म अमेरिकाबाट आउँदा भरखर भरखर नेपालमा इन्टरनेट पसेको समय थियो । त्यो इन्टरनेट गाउँमा जाने भन्ने कुरा त सम्भव नै थिएन । त्यति बेला अहिलेको जस्तो मोबाइल भइदिएको भए अथवा अहिलेको जस्तो नेटवर्क भईदिएको भए म चाहिं सायद यो इन्टरनेटतिर लाग्ने थिइनँ होला । मुख्य कारण चाहि ः गाउँघरमा सञ्चारको धेरै समस्या थियो । सञ्चार छदै थिएन । इन्टरनेट भन्ने कुरा त गाउँलेहरुलाई थाहै थिएन । त्यति बेला मैले सोचेको कुरा के थियो भने– गाउँघरका स्कुले विद्यार्थीलाई इन्टरनेट सिकाएर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो । शिक्षामा इन्टरनेट प्रयोग गरेर अझ शिक्षा क्षेत्र मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले शिक्षाको लागि मैले इन्टरनेट लगेको थिएँ ।
विदेशतिर पनि इन्टरनेट पढाइमा प्रयोग भइरहेको थियो । इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षा खोजमूलक बनिरहेको थियो । त्यस्तै किसिमको नेपालको गाउँघरमा पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले मैले प्रयोगमा ल्याएको थिएँ । तसर्र्थ मुख्य कारण त शिक्षा र सञ्चारको लागि भनेर इन्टरनेट शुरु गरियो । पछि काम गर्दैजादा शिक्षा र सञ्चारको लागि मात्रै नभएर स्वास्थ्य, व्यापार तथा अन्य कामको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने रहेछ भनेर त्यतातिर लागियो । यी सब द्वन्द कालमा गरेका कामहरु हुन् । पछि द्वन्द सकिएपछि विस्तारै गाउँघरमा मोबाइल पुग्न थाल्यो । केही हदसम्म सञ्चारको समस्या त समाधान भयो तर पनि इन्टरनेट त राम्रोसँंग पुगेको थिएन र छैन पनि । अहिले पनि सुगम ठाउँहरुमा इन्टरनेटको सुविधा छ तर दुर्गम ठाउँहरुमा पर्याप्त मात्रमा पुगेको छैन । इन्टरनेटको जुन ब्याण्डउइथ चाहिन्छ पढ्नको लागि, त्यो पुगेको छैन ।
मुलुकको नयाँ संरचनापछि तपाईंको काममा परिवर्तन छ कि ?
नयाँ संविधान बनेर नयाँ सरकार बनिसकेपछि, गाउँपालिकाहरु भइसकेपछि उनीहरुले इन्टरनेट विस्तारको कामहरु गरिरहेका छन् । त्यसैले मैले अहिले इन्टरनेटको काम छाडेको छु । यो इन्टरनेट विस्तारको काम अहिले मैले नगरेपनि हुन्छ । इन्टरनेटको विस्तार गर्ने, गाउँलेहरुलाई सिकाउने थुप्रै एनजिओ, आईएनजिओहरु पनि जन्मिएका छन् । थुप्रै संस्थाहरु पनि छन् ।
गाउँपालिकाहरुले सहयोग मागे भने उनीहरुलाई सहयोग दिइरहेको छु । वर्तमानमा मैले यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै कम काम गरिरहेको छु । तर अहिले पनि गाउँ–गाउँमा ब्रडब्याण्ड इन्टरनेट पु¥याउन इन्टरनेट कम्पनीहरु खासै लागेको देखिन्न । त्यस्ता इन्टरनेट कम्पनीहरु नलागेका ठाउँहरुमा कसैले सहयोग माग्यो भने म अहिले पनि मद्दत गर्न तयार छु ।
इन्टरनेटको विस्तारमा एन्जियो–आईएनजिओ भन्नुभो तर हेर्दा त यिनीहरु प्राय सहरकेन्द्रित नै छन हैन र ?
एनजिओ–आईएनजिओ त धेरै सहरकेन्द्रित नै छन् । आफूलाई कहाँ सजिलो हुन्छ त्यही काम देखाउँने हिसाबले जान्छन् । अप्ठ्यारो ठाउँमा जादैनन् । एनजिओको कामभन्दा पनि गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यकालमा म केही गरेर देखाउँछु भन्ने काम हो । जो अलिक आधुकिन विचारधारा भएका युवा संस्थाहरु छन् उनीहरुले चाहिं गाउँमै काम गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाको तर्फबाट बजेट छुट्याएर गाउँलेहरुलाई पहुँच पु¥याउँने क्रममा धेरै नभएता पनि केही छन् । त्यस्ताको लागि चाहिं गाउँपालिकाहरुले ठेक्कापट्टा गरेर काम गराइरहेका छन् ।
शुरु शुरुका दिनहरुमा स्वदेशी वा विदेशीहरुसँग कसरी सहयोग भाग्नु भयो ?
मैले कसैसंँग पनि पैसा माग्दिनँ । मलाई पैसा दिनुहोस् म यस्तो गर्छु भनेर म कसैलाई पनि भन्दिनँ । कसैको ढोकामा गएर मैले मागिनँ । कसैलाई जबरजस्ती गर्दिनँ । तर कसैले चाहिं मैले गरेको काम देखेर सहयोग गर्छन् भने त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ । मैले अहिलेसम्म भनेको कुरा के छ भने राष्ट्रको लागि यस्तो यस्तो कामहरु गरिएको छ । आविस्कार केन्द्र खोल्नुभन्दा अगाडि म गाउँगाउँमा काम गर्थे – कम्युटर, इन्टरनेट, वायरलेस आदि कामहरु । मान्छेले देखेर मेरो गाउँमा पनि लगिदिनुप¥यो भन्थे । अर्कोले मेरोमा पनि भन्थे । उनीहरु पैसा उठाउँथे अनि पठाउँथे । मैले चाहिं लगिदिने ठाउँमा लगि दिन्थे ।
मैले कसैलाई पनि राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रको लागि यति पैसा दिनुहोस् भनेर कहिले पनि भगिनँ । काम गर्ने हो । त्यो कामको लागि मनपर्छ भने कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउने हो । त्योभन्दा उहाँहरु सहभागी हुन आउनुहुन्थो ।
अहिले राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र बाहेक अरु के के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म अहिले कहीं पनि आवद्ध छैन । देशको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता अनुसन्धान राष्ट्रिय केन्द्र नै हो । त्यहाँभन्दा अरु काम गरिंदैन । विगत दुई वर्षदेखि म राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रमा छु । त्यसैमा काम गरिरहेको छु । अहिले म इन्टरनेटको कामभन्दा पनि सफ्टवेर प्रयोग गरेर गाउँ–गाउँमा अझ धेरै सुविधा कसरी दिन सकिन्छ भन्नेतिर लागेको छु । यसमा पनि थुप्रै संघसंस्था तथा कम्पनीहरु गाउँपालिका–नगरपालिकालाई सहयोग गर्न लागि रहेका छन् ।
म आफू चाहिं व्यावसायिक रुपमा लागेको छैन । तर कसैले यस्तो चिज गरिदिनुप¥यो भनेर आएका खण्डमा मैले आफूले सकेको मदद्त गर्छु । मैले यो इन्टरनेटलाई व्यवसायको विषय बनाइनँ । एउटा सामाजिक कामको रुपमा मात्र लिएँ । यसबाट मैले पैसा कमाउने भन्ने किसिमको सोचाइ राखिनँ । नवपुस्ताहरुले यसलाई लिइरहेका छन् । उनीहरुले गर्नुपर्छ । अहिलेका युवाहरुले नै गर्नुपर्छ । त्यसैले म अलिक टाडा हुदैछु । अहिले कलेज पढेकाहरुले मैले जसरी गाउँ गाउँमा इन्टरनेट प्रविधिबाट इन्टरनेट लैजाने गर्थे त्यसरी नै व्यावसायिक रुपमा विस्तारै विस्तारै काम गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रले के उद्देश्य राखेको छ र अहिले के गर्दैछ ?
राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रको उद्देश्य भनेको कुनै एनजिओ अथवा आईएनजिओको जस्तो होइन । यो सरकारले राख्नुपर्ने लक्ष्य हो । त्यो भनेको नेपाललाई सवृद्ध बनाउने लक्ष्य हो । योे सरकारले बनाइरहेको छ र काम पनि गरिरहेको छ । म पनि त्यस लक्ष्यमा लागिरहेको छु । देशलाई कसरी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य रुपमा सवृद्ध बनाउने भनेर दीर्घकालीन उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको छु ।
तर हामीले रोजेको बाटो र सरकारले रोजेको बाटोमा अलिकति फरक छ ।
देशको भौतिक पूर्वधार कसरी बनाउने भन्ने कुरामा सरकार केन्द्रित छ भने राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रको उद्देश्य चाहिं सवृद्ध बनाउनको लागि देशको सबभन्दा ठूलो सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । देशको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको चाहिं एकदमै प्रतिभाशाली युवाहरु हुन् । यस्ता युवाहरुलाई विदेश पलायनबाट रोक्नको लागि केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई एउटा अवसर दिनुपर्छ । जो बस्न चाहन्छन् उनीहरुलाई अवसर दिएर उनीहरुको प्रतिभालाई फलाएर फुलाएर, अनुसन्धान–आविस्कार गरेर, त्यसलाई व्यापार गरेर, देशको आयात घटाउने र निर्यात बढाउने काम गरेर, देशको आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच दीर्घकालीन सोच हुनुपर्छ । यस्तो खालको आभियानमा आविस्कार केन्द्र छ ।
आविस्कार केन्द्रले रोजगारी सृजना गर्ने कस्तो उद्देश्य राखेको छ ?
रोजगार उत्पादनको लागि अहिलेको सरकारले के कार्यक्रम गरेको छ र ? रोजगारी भनेर अहिले जागिर दिइरहेको छ । त्यो रोजगारी उत्पादन गरेको होइन । रोजगारी सृजनाको लागि त काम हुनुप¥यो । उद्योगधन्दा हुनुप¥यो । अहिलेको कार्यक्रमले त त्यो रोजगारीको लागि त्यत्तिकै ल तिमीहरुले काम पाएनछौ, हामीले काम दिन्छौ भनेर काम दिएको मात्र हो । रोजगारीको सृजना गर्नको लागि सर्वप्रथम त कुनै पनि आविस्कार हुनुप¥यो । त्यसअनुसार उद्योग धन्दाहरुको विकास हुनुप¥यो । व्यवसायको विकास गर्नुप¥यो ।
प्रतिभाशाली मान्छेहरुलाई उद्यमी बनाउनुप¥यो । उद्यमी बनेपछि उनीहरुले रोजगारीको सृजना आफै गर्छन् । त्यसकारणले हाम्रो पुग्ने गन्तव्य एउटै भएता पनि सरकारले त्यो लक्ष्यसम्म पुग्ने बाटो जुन रोजेको छ, त्योभन्दा हामीले एकदमै भिन्न तरिकाले रोजेका छौं । हामीले रोजेको तरिका के भने विकसित देशहरुले जसरी आफ्नो देश विकसित गरे, आफ्नो देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाए, त्यही नै हो हामीले रोजेको बाटो । अमेरिका भनौं अथवा अरु जुनसुकै विकसित देशले आविस्कार गरेका छन् ।
अनुसन्धनलाई एकदमै प्राथमिता दिएर, त्यसमा खर्च गरेर, त्यहाँका प्रतिभाहरुलाई ठाउँ दिएर, त्यस्ताको सोचबाट नयाँ कुराको आविस्कार गरेर, त्यसलाई व्यापार गरेर, उनीहरुले देशलाई सवृद्ध बनाएका हुन् । त्यो कुरा हाम्रो देशको अहिलेसम्मको कुनै पनि सरकारमा यो नगरी नहुने हो भन्ने कुरा बुझेका छैन्न् । अलिअलि गर्ने भन्नेसम्म चाहि पुगेको छ तर पूर्णरुपमा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिं छैन । नगरी नहुने हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म हाम्रो देशको कुनै पनि नेताको दिमागमा घुसेको छैन ।
देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि अनुसन्धनको महत्व कस्तो देख्नुहुन्छ ?
देशलाई सवृद्ध बनाउन विभिन्न काम गर्नुपर्छ । तर अहिले काम गर्नको लागि पूर्वधारमा मात्र सरकारले पैसा खन्याएको छ । पूर्वाधारको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति लगाएको छ । त्यो मैले नराम्रो काम गरे भन्न खोजेको होइन । पूर्वाधार चाहिन्छ तर के बुभ्mनुप¥यो भने– पूर्वाधारको विकासले मात्रै देशको विकास हुन्छ र देश सवृद्धि हुन्छ भन्ने होइन । जनशक्ति चाहिन्छ । पूर्वाधारको विकास चाहि गर्ने अनि जनशक्ति रोक्नको लागि कुनै प्रयास नगर्ने, कुनै कार्यक्रमहरु नल्याउने हो भने देश विकास हुदैन । जनशक्तिलाई रोक्नको लागि उद्योगधन्दाहरुर चाहिन्छ । रोजगारिको सृजना गर्नुप¥यो ।
रोजगारीेको सृजना गरेपछि मात्रै बल्ल त्यो पूर्वाधारको विकास गरेको फाइदा हुन्छ । पूर्वाधारको विकासतिर लाग्ने, रोजगारीको सृजना नगर्ने, मान्छेले चाहिं नुन तेल खान, छोराछोरीको एकसरो लुगा फेर्नको लागि विदेश नगई सुख नहुने भएपछि त्यो पूर्वाधारको विकास के काम । त्यो रोजगारी सृजना गर्नको लागि पहिला त अनुसन्धान गर्नुप¥यो नि । कुनै आइडिया त आउला त्यो आईडियाले काम गर्छ कि गर्दैन हेर्नुप¥यो नि । उद्यमशील हुनको लागि सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेको वातावरण हो । नेपाल सरकारले युवाहरु उद्यमशीलताको लागि सुहाउँदो वातारण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । युवाहरुलाई उद्यमशील बनाउनको लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अनुसन्धन हुनुपर्छ । जबसम्म खोज अनुसन्धनलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिदैन तबसम्म यो देश समृद्ध हुदै हुदैन ।
अहिलेका युवाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सल्लाह उपदेश दिने काम म गर्दिनँ । म के भन्न चाहन्छु भने युवाहरुलाई – आपूmलाई मनमा लागेको काम गर । चाहे जेसुकैले जेसुकै भनोस् । तर आपूmलाई राम्रो लागेको कामले आफूलाई पनि फाईदा गरोस् र अरुलाई पनि हित होस् । यस्तो सोचाइ छ भने युवाहरुले आफूले मनले आँटेको काम गर्नुपर्छ । आफ्नो र अरुको हित हुने खालको काम छ भने अरुको सल्लाह सुझाव खोज्नु पनि पर्दैन । किनभने यस्ता खालका कुराहरु मैले मेरो जिन्दगीमा प्रत्यक्ष रुपमा भोगेको छु । सल्लाह सुझाव माग्दा नेपालमा चलन के छ भने उसलाई उत्साहित होइन कि हतोत्साहित गरिन्छ । नकारात्मक तवरले लिन्छन ।
त्यसैले युवाहरुले आफूले आँटेको काम चाहि गर्नुपर्छ । एकदम लागिपरेर गर्नुपर्छ । काम गर्दा असफल पनि भइन्छ तर असफल भयो भनेर हरेस खानु हँुदैन । अझ प्रयास गर्नुपर्छ । प्रयास गर्ने क्रममा धेरै कुराहरु सिकिन्छ । त्यसकारणले युवाहरुले आफ्नो जोस जाँगर छदै, आफ्नो सोचलाई जसरी हुन्छ अगाडि बढाउनुपर्छ । युवाहरुले कहिले पनि पढेर जागिर खाएर बस्छु भनेर सोच्नु हुदैन ।
केही पनि सोच आएन भने जागिर खानु पनि प¥यो तर जागिर खानु भनेको अर्काको काम गर्नु हो । अर्काको काम गरेबापत त्यसले अलिकति तलब दिन्छ । त्यही तलबले ज्यान पाल्ने हो । परिवार पाल्ने हो । तर आफ्नो विकास गर्ने होइन । त्यसकारण युवाहरुले सकेसम्म आफू उद्यमी हुनको लागि नौलो–नौलो तरिकाले कामहरु गर्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने देश र नागरिक बन्ने हो ।
सुन्दर आँखा कस्तो हुन्छ ?
न्यायिक सुशासनको बाटोतर्फ प्रधान न्यायाधीश
अनुदार ओली, काँक्रा चोरलाई किन हान्ने
जेठको दोस्रो हप्ताभित्रै एसईई सक्ने तयारी
संसद पुनर्स्थापनाको खुशीयालीमा दीप प्रज्वलन (फोटो
अविश्वासको प्रस्ताव र संविधानको व्यवस्था
हेटौंडामा न्याय माग्दै निर्मला र भागरथीहरु
पत्रकार महिला आवास गृहको उद्घाटन
तीन सञ्चारकर्मीलाई इन्जाको सामुदायिक पुरस्कार
सपना रोका मगरलाई धम्क्याउने बस्नेत गोंगबुबाट..
दोस्रो चरणको खोप ८ हप्तापछि उपयुक्त’
भागरथी हत्या प्रकरण दिनेशको डीएनए परीक्षणका..
अदालतप्रति सबैले सम्मान गरेको पाइन्छ :..
माता पार्वतीको जन्मथलो पाङ अब ‘पार्वतीधाम’
सर्वोच्चपछि दलको ध्यान संसद्
फिमेलले र्‍याप गाउने हिम्मत गरेनन्, मैले मेरो एक्सको छम्मा गाइदिएँ : सिर्जना खत्री
यौन सम्पर्क राख्ने सही समयबारे विशेषज्ञहरुका धारणा
भागरथी हत्या प्रकरण दिनेशको डीएनए परीक्षणका लागि पठाइयो
अदालतप्रति सबैले सम्मान गरेको पाइन्छ : प्रचण्ड
संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति गैर संवैधानिक :बार